मरेपछि हामीलाई के हुन्छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी एफिक एस्टोनियन ओसेसियन काचिन किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्दौ न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बम्बारा बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन भलेन्सियन भियतनामिज मङ्गोलियन मले मल्यालम माम मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ: “जिउँदाहरूले हामी मर्नेछौं भनी जान्दछन्‌, तर मरेकाहरूले ता केही पनि जान्दैनन्‌। तिनीहरूका निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन।” (उपदेशक ९:५; भजन १४६:४) त्यसैले मरेपछि हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ। मरेकाहरूले सोच्न, केही गर्न वा महसुस गर्न सक्दैनन्‌।
मरेपछि के हुन्छ भन्‍ने कुरा ईश्‍वरले पहिलो मानिस आदमलाई बताउनुभयो। आदम अनाज्ञाकारी भएपछि ईश्‍वरले तिनलाई यसो भन्‍नुभयो: “तँ माटै होस्‌ र माटैमा फर्किजानेछस्‌।” (उत्पत्ति ३:१९) ईश्‍वरले आदमलाई ‘भूमिको माटोबाट बनाउनुअघि” तिनको कुनै अस्तित्व थिएन। (उत्पत्ति २:७) मरेपछि आदम माटैमा फर्के र तिनको अस्तित्व पनि मेटियो।
मरेपछि हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ। मानिस र जनावर दुवैको सन्दर्भमा बाइबल यसो भन्छ: “किनभने सबै माटैले बनिएका हुन्‌, औ सबै माटैमा मिल्नेछन्‌।”—उपदेशक ३:१९, २०.
मृत्यु सबै कुराको अन्त होइन
बाइबलमा मृत्युलाई निद्रासँग पनि तुलना गरिएको छ। (भजन १३:३; यूहन्‍ना ११:११-१४; प्रेषित ७:६०) गहिरो निद्रामा परेको मानिसलाई आफू वरिपरि के भइरहेको छ भनेर थाह हुँदैन। त्यसैगरि मरिसकेकाहरूलाई पनि केही थाह हुँदैन। कोही मानिसलाई निद्राबाट ब्यूँझाएजस्तै ईश्‍वरले मरिसकेकाहरूलाई ब्यूँताउनुहुनेछ; उनीहरूलाई फेरि जीवन दिनुहुनेछ। (अय्यूब १४:१३-१५) ईश्‍वरले पुनर्जीवित बनाउनुभएका मानिसहरूको लागि मृत्यु नै सबै कुराको अन्त होइन।
मृत्युपछि हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ? मरिसकेका हाम्रा प्रियजनहरूलाई के हामी फेरि कहिल्यै भेट्‌न पाउनेछौँ?
मानिस मरेपछि कहाँ जान्छ?
मरेका मानिसहरू कहाँ छन्‌ र मानिसहरू किन मर्छन्‌ भन्‍नेबारे बाइबलले के सिकाउँछ, थाह पाउनुहोस्‌।